GỊNỊ MERE Ị WỤNYE WINDOWS 8? IHE Ị GA-EME - WINDOWS - 2019
Gịnị mere ị wụnye Windows 8? Ihe ị ga-eme
Ndewo ndi nleta ndi enyi gi.
N'agbanyeghị na ị bụ ndị mmegide nke Windows 8 arụmọrụ arụmọrụ, mana oge na-aga n'ihu na-aga n'ihu, ma n'oge na-adịghị anya, ị ka ga-etinye ya. Ọzọkwa, ọbụna ndị mmegide siri ike na-amalite ịkwaga, ihe kpatara ya, karịa karịa, bụ na ndị mmepe na - akwụsị ịmepụta ndị ọkwọ ụgbọala maka osọ ochie na ihe ọhụrụ ngwaike ...
N'isiokwu a, m ga-achọ ikwu banyere njehie ndị na-emekarị n'oge ntinye nke Windows 8 na otu esi edozi ha.
Ebumnuche maka ịbịnye Windows 8.
1) Ihe mbụ ị ga-achọ ịlele bụ na akụkụ kọmputa ahụ na-agbaso ihe kachasị mkpa maka sistemụ. N'ezie, kọmputa ọ bụla nke oge a kwekọrọ na ha. Mana m onwe m ga-abụ onye akaebe, dịka na otu usoro ihe ochie, ha gbalịrị ịwụnye OS a. Na njedebe, na awa 2, naanị m na-agwụcha ahụ m ...
Ihe kacha mkpa:
- 1-2 GB nke Ram (maka 64 bit os - 2 GB);
- Nhazi na oge elekere 1 GHz ma ọ bụ karịa + nkwado maka PAE, NX na SSE2;
- ohere n'efu na diski ike - ọ bụghị ihe na-erughị 20 GB (ma ọ bụ karịa 40-50);
- kaadị vidiyo na nkwado maka DirectX 9.
Site n'ụzọ, ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu na ha wụnye os na 512 MB nke RAM na, o doro anya, na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Onwe m, anaghị m arụ ọrụ na kọmputa dị otú ahụ, ma ana m eche na ọ dịghị eme n'emeghị ntughari na nkwonkwo ... M ka na-akwado ya ma ọ bụrụ na ị nweghị kọmputa nke kachasị dị na iji wụnye OS dị osụụ, dịka Windows XP.
2) Njehie kachasị njọ mgbe ị na-etinye Windows 8 bụ ụgbọala na-agbaghị agbazi ma ọ bụ diski. Ndị ọrụ na-ejikarị ntinye faịlụ ma ọ bụ gbaa ha ọkụ dị ka diski oge. Dị ka o kwesịrị ịdị, nhazi ahụ agaghị amalite ...
N'ebe a, m nwere ike ịgụ isiokwu ndị a:
- Dekọọ diski disk Windows;
- mepụta ngwa ngwa na-agba ọsọ.
3) Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-echefu naanị ịtọlite ​​BIOS - ya onwe ya na-ahụkwa disk disk ma ọ bụ USB flash na faịlụ nwụnye. Dị ka o kwesịrị ịdị, ntinye ahụ adịghị amalite na nchịkọta na-emebu nke ochie sistemụ arụ ọrụ.
Iji guzobe BIOS, jiri isiokwu ndị dị n'okpuru:
- BIOS setịpụ maka ịnya si na windo mbanye;
- esi mee ka buut si CD / DVD na BIOS.
Naanị emela ka ị kwụsị iji mee ka ntọala ahụ dị mma. M na-atụ aro ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta nke motherboard gị ma chọpụta ma enwere mmelite maka Bios, ikekwe na nke ochie gị enwere ajọ mmejọ nke ndị mmepe ahụ (maka nkọwa ndị ọzọ banyere mmelite).
4) Ka m wee ghara ịga n'ebe Bios nọ, m ga-asị na njehie na ọdịda na-eme nke ukwuu, ọtụtụ mgbe n'ihi FDD ma ọ bụ Flopy Drive mbanye gụnyere na Bios. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ya ma ọ nweghị mgbe ọ bụla - akọrọ nwere ike gbanwee na BIOS ma ọ ghaghị nkwarụ!
Ọzọkwa n'oge ntinye, lelee ma gbanyụọ ihe ọ bụla ọzọ: LAN, Audio, IEE1394, FDD. Mgbe echichi - dịka ịtọgharịa ntọala ka kachasị mma ma ị ga-arụ ọrụ nke ọma na os ọhụrụ.
5) Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndị nlekota oru, ihe nbipute, ọtụtụ disks siri ike, mgbanaka ncheta, kpochapụ ha, hapụ otu ngwaọrụ n'otu oge na ọ bụ naanị ndị na-enweghị nke kọmputa ahụ apụghị ịrụ ọrụ. Dị ka ihe atụ, nyocha, keyboard na òké; na sistemụ usoro: otu diski ike na otu RAM.
E nwere ihe dị otú ahụ mgbe ị na-etinye Windows 7 - usoro ahụrụghị otu n'ime monitors abụọ ejikọrọ na unit usoro. N'ihi ya, a na-ahụ ihe ngebichi ojii n'oge echichi ...
6) Akwadoro m ka m gbalịa ịnwale ntaneti RAM. N'ihe nkowa banyere ule a: Site n'ụzọ, gbalịa wepụ ụra, iji kpoo njikọ maka ntinye ha site n'ájá, iji kọwaa ndị kọntaktị na eriri ahụ na otu na-agbanwe agbanwe. Ọtụtụ mgbe enwere ọdịda n'ihi enweghị ike ịkpọtụrụ.
7) Ma nke ikpeazụ. Enwere otu ihe dị otú ahụ na keyboard anaghị arụ ọrụ mgbe ị na-etinye os. O wee pụta na n'ihi ihe ụfọdụ USB nke ejiri jikọọ ya arụghị ọrụ (n'eziokwu, o doro anya na ọ dịghị ndị ọkwọ ụgbọala na nkesa nwụnye, mgbe ị wụnye os na imelite ndị ọkwọ ụgbọala, ụgwọ USB). Ya mere, m nwere ike ikwu mgbe ị na-etinye mgbalị iji njikọ PS / 2 maka keyboard na òké.
Isiokwu a ma kwe nkwa kwue. Enwere m olileanya na ị nwere ike ịchọpụta ihe mere Windows 8 anaghị arụnyere na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ.
Na nke kacha mma ...